Xaggee cunto iyo dhar iibsan - macluumaadka dadka cusub | USAHello
Xaggee cunto iyo dhar iibsan
Dadka cusub qaarkood aadan hubin meesha laga gato raashinka ay u baahan yihiin, waxaana laga yaabaa in ay ka soo dalkooda hooyo ayaa seegi cuntooyinka dhaqanka. Waxaa jira meelo iyo siyaabo si ay u tagaan shopping ee USA badan oo kala duwan. Baro oo ku saabsan noocyada kala duwan ee dukaamada iibsashada cuntada. Ogow sida ay u soo iibsadaan cuntada dhaqanka. Read ku saabsan halka ay u soo iibsadaan dharka iyo sida loo online dukaameystaan.
Adeeganayay ee Maraykanka, photo copyright UK Aid, CC..
eraygii raashinka ka dhigan tahay cuntaannu kuu soo iibinaynaa. Waa in aad isku dayaan in ay qaataan ku saabsan 20% ama ka yar ee wadarta dakhliga qoyskaaga sida raashinka bil kasta. Taas macnaheedu waxa weeye, haddii ay leeyihiin $1,000 dakhliga bil kasta, waa in aad ku qaataan $200 ama ka yar sida raashinka. Haddii aad hesho $500 bil kasta, awoodin in aad ku qaataan oo kaliya $100 ama ka yar ee cuntada, haddii ay tahay in aad sidoo kale bixinta kharashyada guriga iyo biilasha.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah wax wanaagsan in la ogaado oo ku saabsan gadashada cuntada:
Waxyaalaha qaarkood in kharash yar dalkaaga hooyo waxaa laga yaabaa in qaalisan ee USA. Tusaale ahaan, qaxootiga ka Burma laga yaabaa in la cuno lows cusub iyo canbaha, laakiin waxyaabaha kuwanu waa qaali.
Hilibka iyo midhaha inta badan waa qaali ee USA. Sidaas, laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay isugu dayaan in ay cunaan cuntooyin cusub qaar ka mid ah iyo sidoo kale cuntada dhaqanka aad.
cuntada Iibsiga, gaar ahaan bariis iyo digir iyo khudaar badan, ka dukaanka raashinka iyo waxa lagu kariyo naftaada waxaa guud ahaan ka yar qaali ahayn cunto laga makhaayad ku iibsato.
Haddii shay dukaan waxaa fillooyinka, inaad bixiso qiimaha in. Si kastaba ha ahaatee, tani waa yar run suuqyada ama dukaamada iibinta alaabta loo isticmaalo.
Halkee si ay u iibsadaan raashinka
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah meelaha kala duwan ee aad cunto ka iibsan karaan:
dukaamada cuntada ee Maraykanka yihiin dukaamada waaweyn in lagu qaado noocyo kala duwan oo cunto ah. Waxaa jira dhowr raashinka waaweyn “dukaamada silsilada.” silsilad A waa koox ka mid ah dukaamada in ay isku mid yihiin in magaalooyinka kala duwan ee dalka Maraykanka. dukaamada kala qaybsan yihiin qaybaha sida miro iyo khudaar, hilib, cuntooyin qasacadaysan, iwm. Dukaamo badan raashinka badan oo kugu dhiirinaynaa in aad saxiixdo for free “Club” kaararka, ama “kaararka xubinnimada. Tani waa fiican in la sameeyo, sababtoo ah inta badan aad hesho dhimis aad cunto la kaar, inkastoo card waa lacag la'aan. dukaamada kale, sida Costco, ha lacag kaararka iyo iibiyo tiro badan oo ah raashin badan oo jaban. Kuwani waa qiimihiisu ku biiro haddii aad leedahay qoys ballaaran oo iibsaneyso cuntada iyo alaabada guriga ee u tiro badan.
Magaalooyinka badankood ee US waxay leeyihiin beeralayda’ suuqyada, gaar ahaan xagaaga. At beeralayda ah’ suuqa, waxaad ka heli kartaa miro iyo khudaar daray koray oo iibin by isu beeralayda. In xagaaga, waxaad bixisaan oo laga yaabaa in lacag ka yar intii aad doonaynin at dukaanka raashinka ah ee alaabta la mid ah, laakiin mar kasta ma aha - qaar ka mid ah dukaamada waa weyn waxay awoodaan in ay iska iibiso ka yar beeralayda kuwaas oo u koraan qadar yar oo ah wax soo saarka organic, tusaale ahaan.
Kuwani waa dukaamada yar yar in mararka qaar iibiyo xaddi yar oo raashinka ama cuntada. Inkasta oo dukaamada, kuwaas oo laga yaabaa in ku haboon, sababtoo ah waxay u dhow gurigaaga waa, waxay inta badan waa ka qaalisan dukaanka raashinka.
Bulshooyinka qaar ayaa leh dukaamada qowmiyadaha, taasoo la micno ah dukaan lagu iibiyo raashinka ka soo jeeda isir gaar ah. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in lagu “Suuqa Indian” ama a “Suuqa Chinese” in iibiya cuntooyinka laga dalalka. Waxaad ka heli kartaa dukaamada cuntada qowmiyadaha magaalooyin badan in FindHello.
Makhaayadaha in USA ay u muuqdaan in ay meel ugu qaalisan inay cunto u helaan. maqaayado Fast-cuntada waa ka raqiisan yihiin makhaayadaha si joogto ah, laakiin waxaad u leeyihiin in ay doortaan si taxadar leh si ay u ma cunaan cunto caafimaad qabin oo aad u badan.
Waxaa jira tiro ka mid ah website-iibinta cuntada qowmiyadaha iyo cuntooyinka qaaska kale in ay adag tahay in la helo degaanka ee degmada ama magaalo. Mid ka mid ah tusaale ahaan waa eFood saldhig.
Waxaad ka heli kartaa cuntooyinka qaaska ah baadhi online. Ku qor ereyada "iibsadaan [cunto aad raadinayso] online.”
Halkee si ay u iibsadaan dhar iyo alaabada guriga
In USA, aad leedahay badan oo fursado ah ee halkaas si ay u dukaameystaan ​​dharka iyo waxyaalaha aad guriga. Waxaad had iyo jeer isku dayaan in ay wax ku iibsadaan marka ay yihiin on sale!
stores ama dukaamada used iyo labaad
Marka aad ka fekereyso inaad halkaas ku iibsato dharka, fiirsan stores haddii aad rabto in aad si loo badbaadiyo lacag. stores iibiyo dharka, alaabta guriga, iyo dadka kale ee alaabta guriga iska siiyo. Haddii aad qaadato waqti si uu u eego, aad inta badan ka heli kartaa dhar aad u fiican, waxyaabaha aad jikada, alaabta guriga, alaabta lagu ciyaaro, oo dheeraad ah stores. dukaamada Kuwani waxa ay noqon mid aad u yar-qiimaha, oo waxay inta badan leeyihiin maalmood halkaas oo wax kasta oo dukaanka waa on sale.
iibka Garage iyo iibka yard
sale garaash ama dayrka sale A waa meel fiican si aad u hesho dhar iyo alaabada guriga loo isticmaalo. Waxyaabahaan sida caadiga ah waa kuwo raqiis ah. iibka Garage iyo iibka dayrka ayaa ka mid ah meelaha yar aad iibin karaa USA. Taas macnaheedu waxa weeye haddii aad garaash ama dayrka sale a, waxaad isku dayi kartaa in aad weydiisato qiimo ka jaban ka waxa ku qoran shayga.
dukaamada iyo suuqyada Department
Waxa kale oo aad soo iibsan kartaa dukaamada ama suuqa. dukaamada Kuwaan waxa ay noqon qaali oo ay leeyihiin magac magac caan ah. Taas macnaheedu waxa weeye waxyaabaha yihiin caan ah, maxaa yeelay, brand waa si fiican u yaqaan, sida kabaha Nike.
Superstores yihiin dukaamada ee USA in iibiso ku dhowaad walba. Waxaa ka mid ah dukaamada sida Walmart, Target, iyo Kmart. dukaamada Kuwanu waa guud ahaan ka raqiisan dukaamada waaxda magaca brand.
malaha Waxaa jira badan oo dukaamada maxaliga ah ee magaalada cusub. Waa wax fiican in degaanka dukaanka, maxaa yeelay, aad lacag joogo ee bulshada. Waxaad xitaa ka heli kartaa dukaanka uu leeyahay qof kale oo qaxooti.
Haddii aad u baahan tahay waxyaabaha aad guriga ama in la dayactiro gurigaaga, aad soo iibsan kartaa dukaamada qalabka a. Dadka ka shaqeeya dukaamada, kuwaas oo ka jawaabi doonaa su'aalahaaga ku saabsan dayactirka guriga.
Si Online iyo mail
Dad badan oo Maraykanka ku iibsato dharka ay online ama ka haayaha iman boostada. In USA, aad dhar aad ka iibsan soo celin kartaa internetka ama ka saarney a, sida aad ku noqon karto waxyaabaha iibsaday dukaamada.
Dukaamada ee USA ha dadka celiso haddii ay jiraan wax qalad ah oo iyaga la jira ama xitaa haddii ay kaliya baddalaan maskaxdooda. Laakiin ma ay u oggolaan doonaa in aad ku soo laabto ka dib markii wax aad u isticmaali. Mar kasta oo aad soo iibsan, aad rasiid. Tani waxay cadeyn u tahay in aad soo iibsatay item iyo marka aad u soo iibsaday. Haddii aad go'aansato in aad rabto in aad soo noqon shay, waxaad u baahan doontaa rasiidka. Waa adag tahay inuu ku soo laabto cuntooyin cusub, laakiin waa in aad mar walba cunto ku soo laabto haddii aad laga helay waxaa la dhoco ama la soo dhaafay ay “iibin by” taariikhda.
Halkee ayaan ka iibsan kartaa wax caafimaad leh in la cuno?
Recipes for Thanksgiving caalami ah 2018